Indlu yembali kwisakhiwo esidala kwibhotwe lesixeko
Indawo yam yeholide ikuluhlu oludwelisiweyo lwesakhiwo kwaye, ukongeza kwigumbi lokuhlambela kunye nekhitshi, inamagumbi amathathu ewonke, asasazwe malunga ne-60 square metres / 2 imigangatho. Le flethi ilungele ngokumangalisayo iintsapho kunye nezibini okanye iindawo zokuhlala ishishini. Iqaqambe kakhulu kwaye inendawo yangaphakathi encinci. Mna ngokwam ndisebenza kwibala loyilo loyilo kwaye ndisebenzisa indawo yokuhlala yam yobuchwephesha e-Weimar kwaye ndiyayixabisa kakhulu ipaki entle kunye nedolophu endala.
Kukho iidesika ezintathu zamaplanga ezikumgangatho ophezulu kwiindawo ezahlukeneyo kwigumbi. I-WiFi ekhawulezayo kunye nesofa ekhululekile yokuphumla kuyo, kunye nezixhobo ze-yoga okanye iicushion zokucamngca zikunceda usebenze ngokufanelekileyo. Umabonwakude washiywa ngabom kwelo fulethi.
Ukongeza kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala (siyibiza ngokuthi "i-loft yokulala") kukho isifundo esincinci esihle, esixhotyiswe ngedesika yokhuni oluqinileyo kunye nebhedi ephindwe kabini.
Lilonke, le ndlu igcinwe kakuhle kwaye inekhitshi elitsha elikumgangatho ophezulu (kubandakanya ifriji / isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, isitovu / i-oveni, njl.njl.). Igumbi lokuhlambela linayo nebhafu.
Indlu inokuba mnyama ngokupheleleyo, kukho iimfama okanye iikhethini okanye iikhethini kwiifestile zonke.
Le ndlu ibekwe kwenye yezona ndawo zibalaseleyo zangaphakathi-dolophu (idolophu endala) e-Weimar, kanye ecaleni kwebhotwe lesixeko. Indawo yokuhlala ikwimizuzu nje embalwa ukusuka kwiYunivesithi yaseBauhaus, indawo yenkcubeko eyahlukeneyo efana neThala leencwadi lika-Anna Amalia kunye nePaki e-Ilm. Ivenkile encinci yokutya okunempilo, amaziko enkcubeko, iindawo zokutyela zamazwe ngamazwe nezengingqi, iivenkile zeencwadi, indawo yokubhaka, iikhefi kunye nemarike yeveki zinokufikelelwa ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ngeenyawo.
Ngexesha lokuhlala, ndiyavuya xa unemibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Weimar